भिटामिन ‘ए’ को बढी सेवनले हाड कमजोर- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो शरीर भिटामिन ‘ए’ बनाउनमा अक्षम हुन्छ तर मासु, दुग्ध उत्पादन, सब्जीले युक्त स्वस्थ आहार शरीरको पोषक तत्त्वसँग सम्बन्धित आवश्यकतालाइ पूर्ति गर्न पर्याप्त हुन्छ । अध्ययनको दाबीअनुसार जो व्यक्ति भिटामिन ‘ए’ को अतिरिक्त खोराक लिन्छन् उनीहरूको हाडलाई नोक्सान पुग्ने खतरा बढ्छ । प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७५ ०८:३०
भोको पेट किन रिस उठ्छ ?
काठमाडौँ — वैज्ञानिकहरूले भोक लाग्ना साथ रिस उठ्ने कारण पत्ता लगाएका छन्  । जीवविज्ञानको परस्पर क्रिया, व्यक्तित्व र छेउछाउको माहोलले गर्दा यस्तो हुन्छ  ।
चार सयभन्दा बढी व्यक्तिमा गरिएको यो अध्ययन ‘इमोसनल’ जर्नलमा प्रकाशित छ । त्यसअनुसार भोको अनुभव गर्नाले कहिलेकाहीं मानिसको भावना र दुनियाँलाई लिएर विचार पनि प्रभावित हुन्छ ।
हालै ‘हंग्री’ शब्दलाई अक्सफोर्ड डिक्सनरीले क्रियाका अर्थमा पनि प्रविष्ट गरेको छ । अब ‘हंग्री’ माने— भोकका कारण रिस उठ्नु ।
यो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भोकसँग जोडिएको भावनात्मक स्थितिको मनोवैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गर्नु थियो । कुनै व्यक्ति भोको हुँदा कसरी रिसाउँछ ?
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७५ ०८:२९